Ikhonkco leWayini iCatenas kunye neRothschilds: Ngenisa iCARO eNtsha
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iiwayini kunye neMimoya » Ikhonkco leWayini iCatenas kunye neRothschilds: Ngenisa iCARO eNtsha
Iindaba eziQhelekileyo zaseArgentina • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Culinary • inkcubeko • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • iindaba • abantu • Shopping • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iiwayini kunye neMimoya
LR -Gqirha Nicolás Catena kunye noBaron Eric de Rothschild
Zive ukhululekile ukundibiza nge-snob yewayini! Xa ndiphawula ukuba iwayini iveliswa yintsebenziswano phakathi kwe-Domaine's Barons de Rothschilds (Lafite) kunye nobukhosi bosapho lakwa-Argentina Catena-ndiyishukumisa i-COVID yam ebangela inkungu yengqondo kwaye ndiqaphele, njengoko zombini ezi ntsapho bezikwintengiso yewayini ukusukela Ngeminyaka yoo-1800.
URothschilds ebesandisile umdla kwizidiliya ezingaphaya kweFrance amashumi eminyaka.
Ubudlelwane neCatalas kunye neMalbec yabo baqala ngo-1999, malunga neminyaka eli-11 ngaphambili (1988), njengoko iRothschilds yafumana iVina Los Vascos eChile.
Ngo-2008, ngentsebenziswano ne-Chinese CITIC, iRothschilds yaqala isidiliya ePenglai, China, esikumgama omfutshane ukusuka ePenglai embindini wendawo ekhuselweyo engamahektare angama-377.
Into eqatshelwayo neyaziwayo ngobuhlobo beshishini likaCatena kukuba uJancis Robinson uzukisa uNicolas Catena Zapata, “… ngokubeka iwayini zase-Argentina kwimephu yehlabathi.” ULarry Stone weJames Beard Foundation uqinisekise ukuba uNicolas Catena Zapata ukwiligi enye noRobert Mondavi ekuphuhliseni umboniso wewayini eNapa, “ekhuthaza wonke ummandla ukuba ulwele inqanaba eliphezulu lomgangatho…”
Uphawu “Caro” ngumxube wamagama osapho amabini - uCatena noRothschild kunye nokufakwa kweRothschild ubungcali, ukuxhasa ngezimali, ukuthengisa kunye nolunye utyalo-mali kuye kwenza iikati zeCatena zanyukela kwelinye inqanaba kwaye umbutho wenze eyona "intle kakhulu." iwayini evela eArgentina”(ULaura Catena).
Ukujonga emva. Ukuya Phambili
I-Argentina ithengisa kuphela ikota yeewayini zayo kwilizwe jikelele. Ilizwe ngumvelisi wewayini ohamba phambili kwiLatin America kunye nelesihlanu ngobukhulu emhlabeni. Indawo ekhulayo yewayini, kwiintlambo zeentaba zeAndean, ihlala ithelekiswa neNapa Valley yaseCalifornia. Amaphondo aseMendoza naseSan Juan, embindini weli lizwe, aqatshelwa kwilizwe jikelele ngeMalbec, kunye neBonarda, iSyrah kunye neCabernet Sauvignon. Kunika umdla ukuqaphela ukuba iMalbec yayiyeyona wayini ibalulekileyo eBordeaux de isifo kunye nezinambuzane zakhokelela ekwehleni komdiliya. Udidi lwe Bordelaise lwaziswa eArgentina ngama French phakathi kwiminyaka yoo 1800s apho kuye kwamnandi. Akukho namnye kwimiba eyayikhathaze i-French Malbec ekhoyo kwiintaba zeAndes njengoko izidiliya zase-Argentina zityalwe ngaphezulu komgca bekungenazo iincukuthu kwaye amathafa asentabeni abonelela ngesixa esikhulu sokungaphazanyiswa, nelanga elinamandla.
Umzi mveliso we wayini wase Argentina ufumene unyango olukhethekileyo kurhulumente wesizwe ewuvala kulengxwabangxwaba yezoqoqosho kweli. Urhulumente uzimisele ukuba iivenkile zewayini kufuneka zivunyelwe ukuba zisebenze njengokwenza iwayini “yinto ebalulekileyo” evumela uninzi lweewayini ukuba lusebenze lungaphazanyiswa kulo lonke ubhubhane.
Ukutshixeka kwenyusa ukusetyenziswa kwewayini elizweni kubonisa ukukhula kweepesenti ezisi-7 ngaphezulu kowama-2019 xa ukuthengiswa kwewayini kwaba malunga ne-8.83 yezigidi zehektare, ngelixa i-8.4 yezigidi zehektare zarekhodwa ngo-2018. Ngokubhekisa kumntu ngamnye, kwi-2020, ukusetyenziswa komntu wewayini e-Argentina kufikelela kwi-6.21 yeelitha ngomntu ngamnye, ukusuka kwi-2019 yeelitha ngomntu ngamnye orekhodwe kunyaka ophelileyo. Ngokuqinisekileyo oku kwabenza abenzi bewayini bonwaba njengoko iArgentina ithengisa kuphela ikota yewayini ngaphandle kwelizwe. Ukuthunyelwa kwewayini kumazwe angaphandle kukhule ngeepesenti ezingama-19.5 ukusuka ngeyoMqungu ukuya kweyeNkanga xa kuthelekiswa nokwehla kwehlabathi phantse ngama-18.0 eepesenti (Instituto Nacional de Vitivinicultura).
Usapho lakwaCatena luthathe ixabiso elipheleleyo loxolelo (njengomvelisi wokutya) kwaye ekuqaleni kweCovid (nge-20 Matshi 2020) abasebenzi banxiba iimaski kunye neiglavu bangena kwizidiliya ukuya kuqokelela iidiliya ezisele zesivuno esingaqhelekanga.
Into ebiyintlekele kwezinye iindawo zaseArgentina ibe ngamava alungileyo eCaro ngomhla wokuqala kuAprili, iDrinks International, yabhengeza ukuba uCatena Zapata uvotelwe iWorld Brand eyaziwa kakhulu kwihlabathi (1) liqela labathengi beziselo kunye neengcali zewayini. , kubandakanya iingcali zewayini ezivela kumazwe ahlukeneyo angama-2020.
Vala phezulu kwaye ubuqu
Ukusukela ekuqaleni kwenkulungwane yama-20 (1902) iwayini yaseCatena yaziwa ngokususa iMalbec kwinkxaso yobomi nokuqonda ixabiso lendawo eziphakamileyo kakhulu kumazantsi eAndean eMendoza, eArgentina.
UNicolas Catena, umenzi wewayini wesizukulwana sesithathu, wayengowokuqala waseArgentina ukuthumela kwelinye ilizwe ibhotile ekumgangatho weMalbec enelebhile yeCatena. Namhlanje yena nentombi yakhe uGqirha Laura Catena bayaqhubeka nokwandisa ukufikelela kwiewayini zabo zeCaro. Umphathi wewayini, u-Alejandro Vigil wajoyina uCatena Zapata ngo-2002
Izidiliya zeAndrianna ziphantse zayi-5000 iinyawo ukuphakama kwaye zaziwa ngokuba yiGrand Cru yoMzantsi Merika.
Ukuphakama okuphezulu kukhuthaza iidiliya zeMalbec ukuba ziphucule iasidi kwaye ngenxa yoko ziyaqabuka kunambitha. Izikhumba ezijiyileyo zenza iidiliya ezixineneyo nezinencasa, zivelisa iwayini enencasa. Kuba iMalbec izele ngokomzimba, iyadlamka kwaye igcwele iziqhamo, ubume bayo kunye nomlinganiso ococekileyo weCabernet Sauvignon iyancoma kwaye inyusa iwayini yokugqibela.
Uhlobo olunye olwaveliswa yi Caro yi Aruma kunye nezinye iwayini yimixube yeediliya ezimbini, iMalbec (amandla okupakisha, isibindi kunye neziqhamo), kunye neCabernet Sauvignon (igalelo lolwakhiwo nobunkunkqele).
Zonke iidiliya zewayini zeCaro zikhiwa ngesandla kwaye zilungiswe ngesandla ngaphambi kokucuthwa kunye nokutyunyuzwa kupheliswe ukubakho kweediliya ezonakeleyo kunye nesiqu se-tannic ukungena kumxube, kudala imeko efanelekileyo yewayini ecekeceke nebuthathaka.
• IBodegas Caro Aruma (ubusuku: ulwimi lwaseIndiya iMendoza ulwimi) 2019. Iipesenti ezili-100 zeMalbec ezivela eValle de Uco (e-Altamira, e-El Peral naseSan Jose). Zinyuswe.
Igama likhethwe njengophawu lobumnyama obugqithisileyo kunye nomoya ococekileyo wentaba wobusuku baseAndes. Ifakwe kwiitanki zentsimbi ezingenasici kwaye zigugile kwiitanki zesamente ezigcina iwayini kubushushu obungapheliyo. Kufike iidiliya zaseMalbec eArgentina enkosi kwi-agronomist yase-France ethe yaqaphela ithuba lokuba iidiliya zikhule ngempumelelo kwindawo ye-Mendoza ephezulu (1868).
Iliso liphawula amaqunube amnyama abomvu ngelixa impumlo ifumana amaqunube amnyama, ipepile emnyama, i-plums, iziqhamo ezibomvu, nelinye iqhinga lesinongo (esilungileyo), kunye nee-violets. I-palate iyamkholisa, le wayini ihambisa ii-cranberries, iiblueberries, kunye nezinye iitannins. Khawuqwalasele njengoyinyaniso yamava eMalbec. Vula iiyure ezimbalwa ngaphambi kokuba i-sips iqale njengoko ivula kwaye inika ngesisa amava omlomo amnandi. Bambisana ne-cheeseburger eluhlaza okwesibhakabhaka okanye inkukhu ye-barbeque.
• IBodegas Caro Amancaya (iAndes intyatyambo yentaba) 2018. Iipesenti ezingama-70 iMalbec, iipesenti ezingama-30 zeCabernet Sauvignon. Iidiliya zivunwa kwiziza ezizodwa zemidiliya emidala eLujan de Cuyo, naseAltamira. Kwiidiliya zeLujan kulinywa kumaleko onke aluhlaza, ilamatye negrabile; eAltamira, izidiliya zibekwe kwi-100m ngaphezulu komphakamo wolwandle kwi-alluvial bed yakudala yoMlambo iTunuyan. Ibekwe ukuba ikhule kwimigqomo ye-oki (iipesenti ezingama-20 ezintsha) kwiinyanga ezili-12 zakha iitannins ezintle kakhulu. Imiphanda yenziwe yiLafite Rothschild eFrance. Isivuno sokuqala sale wayini yayingo 2003. Le wayini ithathwa ngokuba ine "ID yaseArgentina kunye nesimbo seBordeaux" (Lafite.com).
Isibheno samehlo senza oku kube kukuya ewayinini ukuba iruby ebomvu kukukhetha umbala wakho. Njengempumlo ekholisa iwayini iveza icocoa, amakhiwane, iziqhamo ezibomvu kunye nesinamon kwaye ekugqibeleni kwintlama yeziqhamo ezimnyama kunye nom-oki kwindima yokuxhasa. Iiyure ezivulekileyo (okanye iintsuku) ngaphambi kokuba usele-umoya owamkelayo, kokukhona uhambisa ngcono kunambitheka kunye nobunzima. Bhangqa ne-Barbeque, iimbambo, isoseji okanye iigusha
• IBodegas Caro 2017. Iipesenti ezingama-74 zeMalbec, iipesenti ezingama-26 zeCabernet Sauvignon. Ukwaluphala ubuncinci iminyaka eyi-1.5 kwimigqomo, iipesenti ezingama-80 ezintsha.
Yeka! Kuya kufuneka wonwabele umbala omnyama o-violet omnyama wale wayini. Emva koko, vumela impumlo yakho yenze umsebenzi wayo… ukufumana indibanisela yamavumba abonisa amaqunube, ipepile emnyama, iiviliyiti, ii-clove kunye netshokholethi etyebileyo emnyama. Iitannins ezithambileyo zithambisa inkalakahla kwaye zidibanisa kamnandi kunye neasidi ehlaziyayo. I-steak yakho edibeneyo iya kubulela ngomhlobo wayo omtsha.
Le wayini inemveliso encinci kwaye ayiphuhliswa minyaka le. Inqabile kuba ivela kulwahlulo oluthile lwe-terroir. Iintaba kunye nemvula zinqabile eMendoza ke xa kunethayo - inzima kakhulu, kwaye umhlaba awulungelanga ukufunxa onke amanzi enza imilambo ehle iye kwiAndes. Imilambo kwiinkulungwane ezidlulileyo idale zonke izinto ezingena ngaphakathi emlanjeni, kwaye abalandeli banemihlaba eyahlukileyo eyenza ulwazi lomhlaba lubaluleke. Iidiliya zeCaro zikhula kwizidiliya kwiindawo ezizodwa ezenziwe ngumhlaba ongaphantsi. Ezidiliya zikhula kumhlaba okhathalayo, onekalika, yikalikayone etyebileyo yelitye lekalika. Iwayini indala kwimigqomo ngaphambi kokufakwa kwiibhotile.